ကြာဇံ – Everybody Read TChen
သိတယ် စားချင်စရာလေး တီချမ်းချက်ထားတာ တော်လိုက်တာကွယ် လို့တွေးနေကြပြီမှလား ဒီလို စားချင်စရာ အရသာကောင်းကောင်းလေးရအောင် ဘယ်လိုများ တော်တီးတီးတော် လက်စွမ်းပြလိုက်လဲ သိရအောင် ဆက်ဘတ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
ခုတလောတော့ လုပ်စားတာတွေ များနေလို့ ဘယ်ကနေ စတင်ရမှန်းတောင် မသိဘူး။ တီချမ်းတယောက်လဲ
ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ ပရိတ်သတ်လက်ခံမှု အရ ဟင်းချက်ဘလောခ်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာပြီ။ ခုတလော အိမ်မှာ
ချက်တာများလွန်းတော့ လူတွေလဲ မနာလိုဖြစ်နေကြပြီ။ ဒီအပတ် အိမ်မှာ လူတော်တော်စုံကြတယ်။ ညီဝမ်းကွဲတယောက်ရောက်နေသလို အော်ဇီက သူငယ်ချင်းတယောက်လဲ ရောက်နေ နောက်မွေးစားသားကလဲ
ဗီဇာ ကိစ္စ ပြည်တော်ခဏပြန်မယ်ဆိုတော့ ကဲ အဲ့တာဆို မာလာဟော့ပေါ့ လုပ်ကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ဘာရှိသလဲ ကြည့်တော့ ဘာမှ မရှိဘူး အဲ့တာနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ကြေးအိုးပဲ လုပ်ကျွေးမယ် ဆိုပြီးတော့ လွယ်ကူစားမြိန်ကို ဖုန်းဆက် သူရုံးက အပြန် မုန်ညှင်းရွက်ဘာညာဝယ်၊ အသားဝယ်လာ ဆိုပြီးတော့ ကြေးအိုးပဲ လုပ်ဖြစ်ကြတယ်။ လုပ်မယ်ဆိုတော့လဲ တခါမှ မလုပ်ဘူးဘူး အဲ့တော့ အေအေဘီ ကနေ မေးလိုက်တော့ တယောက်က လင့်ခ်ပေး တယ် မြူးရဲ့ဘလောခ်လင့်ပါ။ နောက် ကိုယ့်ဘာသာ ထပ်ရှာလိုက်တော့ စုဘူးအိမ် ကိုထပ်တွေ့တယ်။ ဒီလိုပဲ လိုက်ဘတ် လိုက်ကြည့်တော့လဲ ချက်တတ်သွားတာပါပဲ။ မွေးကတည်းက တော်တာဆိုတော့ ညှင်းညှင်းညှင်း….
ကဲ ပြင်ဆင်တာ အရင် စပါမယ်နော်။ ကြေးအိုးကလဲ ကယိကထတော့များတယ်။ မွစိလေးတွေ လုပ်ရတာများလို့
အသားကို အရင်ပြင်ပါမယ်။ ကြိတ်သားကို လိုသလောက် ဝယ်ပါ။ အဆီပါတာလေးရွေးဝယ်ပါနော်။ အဲ့တာမှ စား
ကောင်းတာ။ တီတို့ကတော့ ၂ ကီလိုထင်တယ် လွယ်ကူစားမြိန်ဝယ်လာတာ။ အသားတွေကို နယ်မယ့်ဇလုံထဲ
ထည့် ကော်မှုန့်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ သကြား၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ နှမ်းဆီ နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ နှံ့အောင်နယ်ပေး ပါတယ်။ ပြီးရင်ပုံအတိုင်း နှပ်ထားလိုက်ပါနော်။
အသည်းလေးတွေကိုလဲ ပါးပါးလေးလှီးပြီးတော့ ကော်မှုန့်၊ ခရုဆီနည်းနည်း ဆား အချိုမှုန့် တို့နဲ့ နယ်ပြီး နှပ်ထားပေးပါ။
ဟင်းရည်တအိုးကို အရိုးတွေနဲ့ တည်ထားပါ။ ဆားအချိုမှုန့် တို့ ခနော် ဝက်ခဲ တို့နဲ့ ညနေကတည်းက ကြိုတည် ထားပါတယ်။ ဟင်းရည်ကို ဆူတာနဲ့ မီးအေးပြီး တီချမ်း မဟာဟင်းရည်ကြည်အောင်တည်နည်းအတိုင်း ဖြေးဖြေး ချင်းတည်ထားပါတယ်။ နောက် အူချိုတွေကိုတော့ သပ်သပ်မလုပ်ချင်တာနဲ့ ဟင်းရည်အိုးထဲ ပစ်ထည့်ထားလိုက် ပါတယ်။ သူက နည်းနည်းကြာကြာလေး ပြုတ်ရတော့ ပစ်သာထားလိုက် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။
ပြီးတော့ မှ ကျက်ပြီဆိုတော့ ဆယ်ထားလိုက်မယ်။ အောက်က ဝက်သားလုံး 7-11 က အဆင်သင့်စားဝက်သားလုံး ပါပဲ။ သူ့ကိုတော့ ချက်တဲ့အခါမှာ ထည့်ပြုတ်ဖို့ ဒီအတိုင်းပဲထားထားပါမယ်။ ဟင်းရည်ထဲထည့်ပြုတ်ထားရင် ပွ သွားတတ်လို့ပါ။
ကြာဇံ ကုိုရေစိမ်ပြီး စစ်ထားပေးပါ။ ဆန်ကြာဇံ ကိုရွေးဝယ်ပါနော်။ ငုံးဥ ကိုလဲ ပြုတ်ပြီး ခွာထားပါ။
ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ကို ဘလန်ဒါနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ ရှာလကာရည် နဲ့ သကြားပါလေရုံလေးထည့်ပြီး ဖျော် ထားပါတယ်။ နောက်တော့မှ ချီလီဆော့ထ် နဲ့ ရောလိုက်တော့ အလွယ် အချဉ်ရည်ရတာပေါ့။
ကြေးအိုးဆိုရင် မပါမဖြစ်က ကျူချိုင်ပါ။ ၃ စင်တီလောက်လေးတွေလှီးထားပါ။ မုန်ညှင်းကိုလဲ သင်ပြီး ရေဆေးစစ်ထားပါမယ်။
ပြုတ်ပါတော့မယ်။ အိုးအလွတ်ထဲကို ခုနက ဝက်ပြုတ်ရည် ကြိုက်သလောက်ထည့်ပါ။ နောက် ဝက်သားလုံးလေးတွေပစ်ထည့် ခဏ ဆူအောင်တည်ပေးပါမယ်။ ခုနက နယ်ပြီးနှပ်ထားတဲ့ အသားတွေကို ဇွှန်းနဲ့ ကော်ကော်ပြီး လုံးထည့်ပါ။
အရည်ဆူလာရင် အရွက်ထည့်၊ ငုံးဥ ထည့် နောက် ခဏထပ်ပေးဆူ ပြီးတော့ ကြာဇံထည့်ပါမယ်။ ကြာဇံက ပရီအကြို စိမ်ပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြာကြာပြုတ်စရာမလိုပါဘူး။ ကြာကြာပြုတ်ရင် ကြာကြာမစံရဘဲမြန်မြန် ပြဲပါမယ်။ ကြာဇံထည့်ပြီးတာနဲ့ အသည်းထည့်၊ ဆား အချိုမှုန့်ထည့်၊ တချက်နှစ်ချက်လောက်မွှေပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ အသည်းကို နောက်ဆုံးမှ ထည့်တာ သူက မြန်မြန်ကျက်လွယ်လို့
ရယ် ကြာကြာပြုတ်ရင် မာပြီးစားမကောင်းလို့ရယ်ပါ။ အသည်း ကို အဲ့လိုလေး ထည့်မွှေလိုက်မှ အရည်လေးက နည်းနည်း နောက်တောက်တောက်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်လို ထွက်လာပါတယ်။ ခုနကတည်းက အိုးထဲမှာ ကြိုပြုတ်ထားတဲ့ အူချိုကိုတော့ သေးသေးလေးတွေညှပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ဆီချက် အတွက်ဆိုရင်တော့ ခုနက ပြုတ်ထားတာတွေအကုန်ကို ဇကာနဲ့ ဆစ်ထုတ်လိုက်ပါ။ နောက် နယ်မယ့် ဇလုံထဲထည့် ပဲငံပြာရည်အကြည်ထည့်။ ဆား အချိုမှုန့် နည်းနည်းထပ်ထည့် နှမ်းဆီ နည်းနည်းလေးထည့် ပြီးရင် နယ်လိုက်လိုက်ရင် အရသာရှိတဲ့ ကြေးအိုးဆီချက်တပွဲရတာပေါ့နော်။ ခုနက ဆစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ အရည်ကို ကျူချိုင်ထည့်လိုက်ရင် ဟင်းရည်ရပါပြီ။ ချိုပေါ့ မြည်းပြီး လုိုတာထပ်ထည့်ပါ။ အချဉ်လေးနဲ့ တွဲဘက်စားလိုက်ရင် ရှယ် တီစီကေအို ပေါ့နော်။
အသားလုံးလေးတွေက နည်းနည်းကြီးသွားတယ် လွယ်ကူစားမြိန်လက်ချက်ပဲ။
ဒါလေးတွေကတော့ အရည်သောက်နဲ့ ဆီချက် ယှဉ်ပြထားတာပါ။ အရည်သောက်ဆိုလဲ နှမ်းဆီနည်းနည်းလေး ထည့်လိုက်ပါအုံးနော် အဲ့တာမှ ဆိုင်ကလို ကြေးအိုး အရသာကော အနံ့ကော ရပါမယ်။ လုပ်ရတာလဲ လွယ် စားလို့လဲကောင်း ဆိုင်က လုို အချိုမှုန့်တွေများပြီး ချွဲပစ်မနေတဲ့ စားပြီးရင် ရေမငတ်တဲ့ TCKO လေးပါနော်။
ရေလည်ကောင်း အရမ်းကောင်း ဂွတ်ရှယ်ကောင်း ကောင်းလွန်းလို့ မွေးစားသားက တောင် နှစ်ပွဲတွယ်ပါတဲ့ တီချမ်းကြေးအိုးပါနော်။
နောက်နေ့ကျ ပရိတ်သတ်တယောက်တောင်းဆိုထားတဲ့ ဟာတခု တင်ပေးမယ်။ မှန်အောင်ဖြေ (၂) မှတ်။
Posted on April 10, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ကြာဇံ17 Comments on TCKO (T Chen Kyae O)
တလောကတည်းက တုတ်ထိုးလုပ်စားမယ် တင်မယ် ဘာညာ ဘာညာ ပြောနေအော်နေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ တကယ်က တီက တုတ်ထိုး မလုပ်တတ်ပါဘူး စားပဲစားတတ်တာပါ။ တုတ်ထိုးဆိုရင် ဆီနဲ့ ကြော်တာလဲ ကြိုက်တယ် ရေနဲ့ပြုတ်တာလဲ ကြိုက်တယ် ရန်ကုန်စတိုင်လ် လဲကြိုက်တယ် မန္တလေး စတိုင်လ် လဲ ကြိုက်တယ် နီနီအရောင် အရည်တွေနဲ့တောင်ကြီး စတိုင်လ် မငြင်းဘူး ကြံမဆိုင်ထည့် ပြုတ်တဲ့ အရည်သောက်လဲ လာထားပဲ
ငယ်ငယ်ကဆို မိုဃ်းကောင်းဘုရားပွဲနေ့တွေဆိုရင် ကျောက်ကုန်းမှာ နေတဲ့ သူငယ်ချင်း ခြံထဲ ကနေ အသည်ကို တောင်းလိုက် ခေါ်စားနေကြပါ။ အဲ့တုံးက ခြင်း ၁၆ တွေ ဘာတွေတောင်မပေါ်သေးဘူး တီတို့က ခြင်းလိုက် အုပ်နေပြီ။
နောက် ငယ်ငယ်က တသက်လုံးကြီးလာတာကတော့ ရန်ကင်း ၁၂ လုံးတန်း တုတ်ထိုးပါ ရောင်းတဲ့ လူကြီး ဆို မိုက်တယ် သူ့သားသမီးတွေအကုန် တုတ်ထိုးရောင်းပြီးကျောင်းထားလာတာ နောက်တော့ မြေနီကုန်း
ရောက်တော့ မြေနီကုန်း ရွှေမန်းရုံ နားက အဖိုးကြီး တုတ်ထိုး အဲ့မှာ လဲ ဂျမခါနာက နပ်စ်မတွေ ဆရာဝန်မတွေနဲ့အကြီး အကျယ် ရန်တွေဖြစ်ပြီး စားခဲ့ရတာပါ မှတ်မှတ် ရရနောက် မန်းတလေးရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတယောက် လိုက်ကျွေးတဲ့ ဒညင်းသီးတွေ ထည့်ပြုတ်တဲ့ သူ့အိမ်နားက တုတ်ထိုး ငယ်ငယ်က တောင်ကြီးမှာ ကျောင်းနေတုံးက စားခဲ့ရတဲ့ လိမ္မော်ရောင် ဟင်းရည်ပါသောက်လို့ရတဲ့ တုတ်ထိုး စတာတွေကို တခုမှ မမေ့ပါဘူး။
ခုတော့ အရင်မြန်မာပြည်က သမီးတပည့်မလေးကြောင့် ကိုယ်တိုင်ချက် တုတ်ထိုး ကိုစားရပါတော့မယ် ဒန်ဒန့်ဒန့်
တုတ်ထိုးမှာ အရေးကြီး တာ အချဉ်ပါ ပရိတ်သတ်ကြီးတွေလဲ အကုန် သဘောတူကြမယ် မျှော်လင့်ပါတယ် မတူလဲ မရဘူးလေ တီ့ စာလာဘတ်နေတာပဲကိုးနော်…..အဲ့တာကြောင့် အရေးအလွန်အင်မတန်မှကြီးတဲ့ အချဉ် ဖျော်နည်း ကို ဦးစွာပထမ ပြုကာပြရရင်တော့….
ပထမဆုံး မြန်မာပြည်ဖြစ် အချဉ်ရည် လိုပါမယ် ယိုးဒယားသော ထိုင်းသော တရုတ်သော အမေရိကန်သော အချသ်တွေ မရပါဘူး တုတ်ထိုးဆိုရင် မြန်မာပြည်ဖြစ် ချီးပန်းချဉ် လို့ တချို့တွေ ခေါ်ကြတဲ့ အဲ့ဒီ အချဉ် လိုကိုလိုပါတယ် မရှိရင် မကောင်းပါဘူး ချီတို လို အချဉ်မျိုး ဆိုရင်လဲ မကောင်းပါဘူး။ အဲ့တော့ မြန်မာပြည်ဖြစ် ချီးပန်းချဉ် ပဲရအောင်ရှာပါ။ ဘေးကတော့ ငရုတ်သီးစိမ်း ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ တောက်တောက်စင်းပါ။
ပထမ ပုံကတော့ ထန်းညက်ရည်ပါ ညောင်စီးကျအောင်ကြိုပါလို့ ဆရာမကြီး ကြည်လဲ့လဲ့ဦးက ပြောပါတယ်။ သူ့ဘေးကတော့ မန်ကျီးရည်နှစ်ပါ သေချာဖျော်ပြီးတော့ အဖတ်တွေ ဆယ်ထားလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ခုနက ချီးပန်းချဉ်ထဲကို ခုနက ဟာတွေအဆင်ပြေအောင် အကုန်ထည့် သမမျှတအောင်မွှေ ဆားအချိုမှုန့်ရော သံပရာရည်ထည့် ပြီးရင် သေချာမွှေအရသာမြည်း အဆင်မပြေရင် လိုတာ ထည့် ပိုသွားရင် ခုနက ထန်းညက်နဲ့ မန်ကျီးရည်ရော ကြိုက်သလိုပြင်ပါလေ။ အဲ့တာ ဆိုပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း အရသာရှိတဲ့ အချဉ်တခွက် ရတာပေါ့။
ဒါတွေကတော့ ထည့်ဝင်မယ့် ကလီစာ အကုန်ပါပဲ။ တီကတော့ အလွယ် စီယမ်ပါရာဂွမ်ကပဲ ဝယ်ပါတယ် အကုန်လုံးက လုပ်ပြီးသား ကိုင်ပြီးသား သန့်သန့်လေးတွေပဲ အူလေးတွေဆို အရောင်တောင် တောက်နေတယ် သန့်ပြီးတောက်ပြောင်နေတယ် ဆိုတာ အဲ့လိုမျိုးဟာကိုပြောတာပဲ။ ပထမ အိုးကတော့ တီက အလွယ် အပျော့ အိုးလို့ခေါ်ပါတယ် အချင်း၊ အူပွ၊ အူချို စတဲ့ အူနဲ့ဆိုင်သော အနုကလေးများပေါ့။ ဒုတိယအိုးကတော့ အမာအိုးလို့ တီကခေါ်တဲ့ အူမကြီး၊ သရက်ရွက်၊ အသဲ၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်၊ အမြီး၊ လျှာ စတာတွေပါပါတယ်။ နောက်ဆုံးပုံလေးကတော့ အူချိုပါ ဘေးနှစ်ဘက်နှစ်ချက် ကို သွားရေကွင်းလေးနဲ့ ချည်ရပါမယ်။ ပုံထဲမှာ ပါတဲ့ အနီရောင်လေးပါ သေချာကြည့်ရင် ပုံရဲ့ ညာဘက်ကနေဆိုရင် ၃ ချိုး ၂ ချိုးလောက် အလယ်မကျတကျမှာ တွေ့ရမှာပါ။ အူချိုက အရမ်းနုတော့ ဆေးနေတုံး ပြုတ်နေတုံး အထဲက အစာတွေထွက်ကျကုန်မှာ စိုးလို့ပါ။ ပြီးရင်တော့ အကုန်လုံး ကိုသေချာဆေးကြောပြီးရင် နယ်ဖတ်တဲ့ အစီအစဉ် စပါမယ်။
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း အရေးကြီးတဲ့ ပဲငံပြာရည် အနောက် ကိုထည့်ပါမယ် ဆား အချိုမှုန့် သကြား စတာတွေထည့်ပါမယ်။ အောက်ကတော့ ပြုတ်တော့မယ် တကဲကဲ အနေအထားပါ။ ပြုတ်တဲ့အခါမှာ ဆီနည်းနည်းထွက်အောင် ဝက်ဆီဖတ်တွေ ထည့်ပြုတ်ပါမယ်။ နောက် မွှေးအောင် ဂျင်း ပြားပြားလေးတွေ လှီးပြီးထည့်ပါသေးတယ်။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် လည်းနည်းနည်းထည့်ပါ။
အပေါ် နှစ်ပုံက အပျော့အိုးပါ။ မပြုတ်ခင် နဲ့ပြုတ်ဆဲ အနေအထားပေါ့။ ဖြူဖြူ အဖတ်တွေက ဝက်ဆီဖတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ပျော့မာပြိုင် တူတူ ပြုတ်ကြတယ် ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နူးတဲ့အထိ ဆိတ်ဆိတ်ကြည့်ပြီး အားရပါးရသာပြုတ်ပါလေ။ ကတ်ကြေးလေးနဲ့ သေးသေးလေးတွေညှပ်ညှပ်ပြီး ပြုတ်ရင်း မြည်းရင်း နူးမနူးကြည့်ရင်း လုပ်ရမယ့် အချိန်အခါပေါ့ကွယ်။
ဟော်ပြုတ်တဲ့ အခန်းပြီးသွားတော့ ကြော်ရပါမယ် တီကတော့ သေချာမသိပါဘူး တီတို့စားတော့ တောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလေနော်။ အိုးထဲထည့်ထည့် ယူလာတာတော့ တွေ့တယ် အဲ့တာတွေက အရောင်လှအောင် ကြော်ပြီးသား လို့ ဆရာမကြီး ကြည်လဲ့လဲ့ဦး ကဖြည့်ပြောပါသေးတယ်။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ခုနက ပြုတ်တာတွေ ဆယ်ပြီး သကာလ ဆီလေးနည်းနည်းနဲ့ ဒယ်အိုးထဲမှာ လှိမ့်ရပါမယ်။ အကုန်လုံးကို တခါဆီလောက် လှိမ့်ပြီးရင်တော့ အနံအရသာ အရောင်အဆင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မူလလက်ဟောင်း ကြည်လဲ့လဲ့ဦး တုတ်ထိုး တအိုးရတာပေါ့ကွယ်။
ဒါကတော့ မနက်ကတည်းက ချွေးတလုံးလုံး နဲ့ တီတို့စားဖို့အရေး ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဆရာမကြီး ကြည်လဲ့လဲ့ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ……ပရိတ်သတ်များ လက်ခုပ်တီးပေးပါ။
ဒါတွေကတော့ ခုနက ကြော်ပြီးတဲ့ အိုးထဲကနေ အအေးခံပြီးတော့ ပန်းကန်ပြားပေါ်ပြန်တင်ထားတာပါ။လှီးတော့မယ်လေ။ ၂၀၀ တန်လား ၃၀၀ တန်လား ၅၀၀ တန်လား ပွဲနဲ့လား တုတ်ထိုးလား အူချည်းပဲလား။ အသံချည်းပဲလား၊ လျှာလေးရောအုံးမလား ပေါ့။
အောက်ကပုံတွေကတော့ တုတ်ထိုးသည်ကြီး တီချမ်း လှီးနေတာပါ ရောင်းနေမကျတော့ အတုံးတွေကြီး ကုန်တယ် အရင်းတော့ ပြုတ်တော့မှာပဲ။ကြိုက်တတ်တဲ့ သူတွေစားဖို့ ကြက်သွန်ဖြူ ဥလေးတွေ ကိုလဲ အခွံခွာထားပါသေးတယ်နော်။
ဒါကတော့ လှီးပြီးသားပုံတွေပေါ့ အူချို သရက်ရွက် အသည်း ကျောက်ကပ် အူမကြီး အချင်း လျှာ စတာတွေပါ။
ဒီနေရာလေးကလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ် အစက ဝက်သားတွေ ပြုတ်လို့ ကျန်တဲ့ အရည်တွေကို လိုသလောက်ရေ ရောပါ ပြီးရင် မုန်ညှင်းဖြူ သို့မဟုတ် ချဉ်ပြုံးလေး လိုချင်ရင် ကြံမဆိုင်ရွက် ခတ်ပြီးတော့ ပြုတ်ပါ ဟင်းရည်ဆူ ရင် နံနံပင် ကြက်သွန်မိတ် တရုတ်နံနံ စတာတွေခပ်ပြီးတော့ အရည်သောက် လုပ်လို့ ရပါသေးတယ်။ မို်က်တယ်နော်။ ဝက်ဆိုရင် “အော်သံ” ကအစ ပစ်ရက် စရာတခုမှ မရှိဘူးတဲ့။ အဲ့တာကြောင့်လဲ အသီးမှာ သရက်၊ အရွက်မှာ လက်ဘက်၊ အသားမှာ ဝက်၊ ပညာမှာ တီချမ်း လို့နာမည်ကျော်ကြပေတာပဲ။
ဒါကတော့ လွယ်ကူစားမြိန် ယူလာတဲ့ သက်သတ်လွတ် ဂေါ်ဖီကြာဇံကြော်များနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက်ကြစဉ်ပေါ့လေ။ ကြာဇံ ကြော်နဲ့ လိုက်အောင် သခွားသီးလေးတွေကို အဝိုင်းလေးတွေ မှတဆင့် အချောင်းလေးတွေ ရအောင်လှီး လိုက်ပါသေးတယ်။ နောက် တို့ချင်ရင် အချဉ် နဲ့ တို့ လို့ရအောင်လဲ သခွားဘေဘီလေးတွေကို လေးစိပ်လှီး လိုက်သေးတာပေါ့နော်။
ဒါကတော့ စကော့ဈေးကုန်းတံတားအောက်က တုတ်ထိုး ကိုလွမ်းလို့ တီချမ်းဘာသာ လုပ်ချလိုက်တဲ့ ကြာဇံ ဝက်သား တပွဲပေါ့အေ။ စားကြပါအုံး ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ………..ကြည်လဲ့လဲ့ဦး လက်ရာ တုတ်ထိုး။
Posted on July 8, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, တုတ်ထိုး, ကြာဇံ, အသုပ်မျာ3း3 Comments on ကြည်လဲ့လဲ့ဦး တုတ်ထိုး
ပျင်းနေပါတယ် အလုပ် က ၃ ရက်ဆက်တိုက်ပိတ်လို့ပါ မေဒေး က တနင်္ဂနွေ ဖြစ်နေတော့ ၂ ရက်နေ့တနင်္လာ ကို အစားပြန်ပိတ်ပေးပါတယ် လောင်းလဗ်သည်ကင်းပါပဲ…ပျင်းပျင်းနဲ့ ဘာချက်ရမှန်းလဲ မသိဖြစ်နေတာနဲ့ဒီနေ့တော့ ကိုကာဆူကီ သွားစားကြပါတယ် မဆိုးပါဘူးစားလို့တော့ ကောင်းပါတယ် ဆားဗစ် က ညံ့တာ တခုပဲ စီယမ် စင်တာ က ပါ ထားတော့ အဲ့တာနဲ့ တလောက ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေထဲက ပဲ ရှိတာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကြာဇံကြော်ပါ အရင်က အရွက်ကြိုက်တဲ့ ကောင်လေးတွေ ကောင်လေးတွေမောင်တွေကိုကြီးတွေ နဲ့ ချစ်နေကြိုက်နေတုံးကလဲ တခါကြော်ဖူးပါတယ် ဒီမှာကြည့်ပါ
Posted on May 1, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ကြာဇံ5 Comments on ကြာဇံကြော်…………
ဒီတခါတော့ အပြောင်းအလဲ ကလေးဖြစ်အောင် သက်သတ်လွတ်ပဲကြာဇံ ကြော် နဲ့ ယိုးဒယား ပဲကြာဇံ သုပ် ကိုတင်ပေးမယ်နော်။ တလောက အသားတွေ ချည်းချက်စားနေတော့ အီလာပြီ။ အအီပြေပေါ့။
ပဲကြာဇံ ကို ရေနွေးနဲ့ပြုတ်ပြီး ရေအေးစိမ် စစ်ထားပါ။ ပဲကြာဇံ နော် ကြော်စားတဲ့ ဆန်ကြာဇံ မဟုတ်။ ပဲဟင်းထဲထည့်တာ ကြာဇံချက် ချက်တာမျိုးနော်။ Glass Noodle လို့ ခေါ်တယ် vermicelli မဟုတ်။ မမှားပါစေနဲ့နော် ကြော်ရတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အသီး အရွက်လေးတွေကို လှီး ပြီး ရေဆေးထားအုံးနော် တီကတော့ အလွယ်ပဲ ရှိတဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ် နဲ့ ဟုိုတလောက ဝက်သား နန့်ဖစ်အောဝ် တုံးက ကျန်တဲ့ ဆလပ်တွေ ကို ထည့်ဖို့ ကြံတယ်
ဆီပူ အိုးနဲ့ငရုတ်သီး ခြောက် ကို နည်းနည်း အရင်ထည့်ကြော်ပါ အနံလေးမွှေးနေအောင်ဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်တော့ ဂေါ်ဖီတွေ ကြော် ဆား အချိုမှုန့် ထည့် ပဲငဲပြာရည် နည်းနည်း ထည့် ပြီးတော့ မှ ခုန က စိမ်ထားတဲ့ ကြာဇံ ကိုထည့် ခဏ ကြော်လိုက်ရင် ရပါပြီ ကြိုက်တတ်ရင် အသား၊ ကြက်ဝက်။ ကြက်သွန်ဖြူ နီ တွေ လဲ ထည့်ကြော် လို့ ရပါတယ် အရောင် လှချင်ရင် အရွက်တွေ ကို အရောင်ပါတာရွေးထည့်ပေါ့ ဥနီ တို့ မုန်ညှင်း တို့ ဘရိုကိုလီ တို့ ဘေဘီကောန်း တို့
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ မြန်ကောင်း သက်သာ လွယ်ကူ အရသာရှိပါပဲ သက်သတ်လွတ် ပဲ ကြာဇံ ကြော် တပွဲ ရပါပြီ ထမင်း နဲ့စားစား သူ့အတိုင်း စားစား အိုအိရှိပါပဲနော်
တီကတော့ ရိုးရိုးလေးပဲ အိမ်က လက်ကျန် အကုန်ဖြတ်တာ ဆိုတော့ သက်သက်လွတ် ဖြစ်သွားတယ်
နောက်တမျိုးကတော့ ဒီမှာ ယမ်းဝန်းဆင့် လို့ ခေါ်တဲ့ ပဲကြာဇံ ယုိုးဒယားစတိုင်လ် သုပ်ပါ သူက တော့ အသုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာတွေကပဲ ပိုများပါတယ် ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်
ပထမဆုံးကတော့ ပုစွန်ခြောက် သေးသေးလေးတွေ ကို ရေနွေးဖျော် လိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ ရေစစ်ထားပါ နောက်ဝက်သား တောက်တောက်စင်း (တီကတော့ စင်းပြီးသားပဲ ဝယ်လိုက်တယ် အလွယ်) ကို ရေစပ်စပ်လေးနဲ့ ကြော်လိုက်ပါ ပုံ ၂ ကိုကြည့် နောက် ပုံ ၃ ကတော့ အစာပလာ ပြင်တာပါ ပန်းရောင်လေးတွေက ဝက်သားချဉ်ချောင်း ကိုချေထားတာပါ ဘေးက သံပရာသီး နောက် ခုန က ရေစပ်စပ်နဲ့ ကြော်ထားတဲ့ ဝက်သား တောက်တောက်စင်း ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း ပါးပါးလှီး အလယ်က မြေပဲလှော် အခွံချွတ်ထားတာ
ပြုတ်ပြီး ရေစစ်ထားတဲ့ ပဲကြာဇံတွေကို နယ်မဲ့ ဇလုံထဲ ထည့်ပါ ကြက်သွန်နီ နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းတွေ ထည့်ပါ အစာပလာ တွေထည့်ပါ ဆား အချိုမှုန့် သကြားနည်းနည်း (အရသာလေးအောင်ပါ) ပြီးတော့ ပုစွန် ငံပြာရည် နည်းနည်း ထည့်ပါနော် သံပရာသီး စိပ်တွေ ကို ညှစ်ထည့်ပြီး နယ်လိုက်ရင် အရသာရှိတဲ့ ပဲကြာဇံ သုပ်တပွဲ ရတာပေါ့ လွယ်မှလွယ် မြန်မှမြန် ကောင်းမှကောင်း ပဲနော်…….
ဒါကတော့ ဆာဗ် လုပ်ခါနီးမှာ အသင့်လှော်ထားတဲ့ မြေပဲ တွေ ကိုထည့်လိုက်တာပါ နယ်တဲ့ ထဲ ထည့်မနယ်ပါဘူးနော် ပျော့ ကုန်မှာစိုးလို့ပါ
ပြီးရင်တော့ အချိုတည်းစရာ ပိန္နဲသီး စေ့ပြုတ် ဆီ နဲ့ ဆားလေးနဲ့ တို့ စားလိုက်ရင် စိမ့်နေတာပေါ့ တီချမ်း က အိမ်လည်လာတာ အစေ့ ကြီးပဲ ကျွေးတယ် မပြောပါနဲ့ အသီးလေးလဲ စားပါ အမွှာလိုက် ခွာပြီးသားတွေ ဝယ်လာတာ
Posted on April 29, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ကြာဇံ, အသုပ်များ5 Comments on သက်သက်လွတ် ပဲကြာဇံကြော် နဲ့ ယိုးဒယား ပဲကြာဇံ သုပ်
မောင် နဲ့တညနေလုံးစကားပြောနေတာနဲ့ အင်္ကျီံလျော်စရာရှိတာတွေလဲမပြီး၊
ဘာမှလဲမစားဖြစ်၊ စကားတွေပြောနေရင် “၀” နေတာလေ။ အဲလိုနဲ့ ည ၁၁ နာရီထိုးသွားပါလေရော။
ဘာမှလဲမစားရသေး ဗိုက်ကလဲဆာ ဘာရှိမလဲလို့ ဗီဒိုသွားမွှေလိုက်တော့ ကြာဇံထုပ်တွေ့တယ်။ နောက်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ကြက်ဥ ၃ လုံး၊ နောက် အရင်တပတ် ကိုကြီး မပြန်ခင်က ၀ယ်ထားတဲ့ အရွက် (မုန်ညှင်းထင်တယ်) ကျန်နေသေးတာသတိရ၊ ပြီးတော့ ၀က်အူချောင်းတွေရှိတယ် အဲတာနဲ့ ကေပြီ ဆိုပြီး ကြာဇံကြော်စားဖို့ပြင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ၀က်အူချောင်း ကို လှီးထားပါတယ် လိုချင်တဲ့အနေပေါ့။
ပြီးတော့ ကြက်ဥ ကို ဆား၊ အချိုမှုန့် သင့်ရုံထည့်ပြီးခေါက်ထားတယ်။
အဲလိုပဲ ကြာဇံကို လဲရေစိမ်ပြီး စစ်ထားပါတယ်။
နောက်အရွက်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေး ကိုသတိရလို့ အများကြီးတထုပ်လုံးထည့်လိုက်တယ်။
ပေါ်မလာတာတောင်ကြာပြီ၊ သင်္ကြန်အသားကုန်ကဲပြီးတော့ နေကောင်းရဲ့လားမသိ၊ စိတ်ထဲထင့်နေတယ်။း(
အရွက်ကိုလဲ ရေစင်အောင်အရင်ဆေး၊ ပြီးတော့ စိမ်ထားပါတယ် နောက် ရေစစ်ထားပြီးတော့ အသင့်ပြင်ထားရင် ကြာဇံစကြော်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
ပထမဆုံး ကြက်ဥ ရယ်၊ ၀က်အူချောင်းရယ်၊ မုန်ညှင်းရွက်ရယ် စတာတွေကို သပ်သပ်စီကြော်ပါတယ်
ခါကြက်ဥ ရှိရင် ကြိုက်ရင်ထည့်လို့ရပါတယ်။ တီကတော့ မကြိုက်လို့မထည့်ပါ။ နောက် အတူတူရောကြော်လဲရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွဲကြော်တာ ပိုကောင်းတယ်။
ဒါကတော့ ကြော်ပြီးသားတွေကို ခဏနေ ကြာဇံနဲ့ရောကြော်ရအောင် ပန်းကန်နဲ့ခွဲထည့်ထားပုံပါ။
ပြီးရင်တော့ ဆီနည်းနည်းလေးထည့်ထားတဲ့ အိုးထဲမှာ ခုနက ကြော်ထားတဲ့ ကြက်ဥရယ် အရွက်ရယ်
၀က်အူချောင်းရယ်ကို အရင်ဆုံးထည်ပြီး ဆီနဲ့လှိမ့်ပါတယ် နောက် ခုနက ရေစစ်ထားတဲ့ ကြာဇံ ကိုထည့်၊
ပဲငံပြာရည်လေးနည်းနည်းထည့် ပြီးကြော်လိုက်ရင် အောက်ပါအတိုင်း စားချင်စဖွယ် ကြာဇံကြော်ကိုရပါပြီ။
နောက်ကြိုက်တတ်ရင် ကြက်သွန်ချဉ်လေးလုပ်ပြီး တွဲစားရင်ရှယ်ကောင်းပါတယ်။ ခုတီ က သံပရာသီးမရှိလို့ မလုပ်ရဘူး။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ် ကြက်သွန်နီ အလော်တော် ၂ ဥ ၃ ဥ လောက်ကို ပါးပါးလေးလှီး ရှယ်ပါးနော် အဲတာမှ စာကောင်းတာ။ ပြီးတော့ ရေစိမ် ညှစ် ပြီးရင် ငရုတ်သီးစိမ်း ပါးပါးလှီးထားတာလေးထည့် ဆား၊ အချိုမှုန့် သင့်ရုံထည့်ပြီးရင် သံပရာသီးလေးညှစ်ပြီးနယ်၊ အဲတာဆိုရင် အင်မတန်မှကို ကြာဇံကြော်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ကြက်သွန်ချဉ်ကိုရပါမယ်။
အောက်ဆုံးကတော့ ပန်းကန်ထဲအရောက် ဗိုက်ထဲရောက်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပုံပေါ့လေနော်။
ကဲကဲ စားကြ စားကြ အားမနာနဲ့နော်။
ဒီပိုစ့်လေးကို ဖြစ်မြောက်လာစေတဲ့ မောင်…
တီလိုချင်တဲ့သီချင်းတွေ ကို အားကြိုးမာန်တက် ကူညီဖွေရှာပေးကြတဲ့ ငယ်နဲ့ ကြယ် ကိုလဲမမေ့မလျော့ခေါ်ကျွေးပါတယ်။ နောက် ချစ်တူမမိရောင် (နေမကောင်းဘူးတဲ့ ဟင့်)၊ ဏီဏီ၊ တီ့သမီး၊
ဒီဒီ၊ ဘာဘာ၊ မာလာ (ပေါ်မလာအတော်ကြာပေါ့)၊ တိတိ၊ မိုင်ဒီယားလေးဒိုင်ယာရီ၊ ဒနည၊ မြောင်းလေး၊ ဂျဲဂျယ်လ်၊ ကိုကိုကြီးကာကာ။ နနခ၊ ဒေါ်ရီတာ၊ မိန်းမစိမ်း နဲ့လွမ်းသုရင်(ဪ သူကတော့ ကုန်ကုန်ရောက်နေရောပေါ့)၊ မိုးခါး၊ အမြဲစိမ်းဖြိုးလေး၊ ပီအမ်၊ သပသ (ခ)ဒေလီယာသူသူ၊ ကိုရဲ (လေလွင့်သူ)၊ ကိုဘို၊ ဦးမွန်၊မမကွမ် (မလာတာ သူအကြာဆုံး)၊ ပူးလေး(ကြိုက်လားစားလားတော့မသိ)၊ မီးလေးဇာ၊ နောက်တခါတခါပေါ်လာတဲ့ ဘိန်းပန်းချို၊ ခုတလောစလာလာလည်နေတဲ့ မေ(mae)၊ ဂလာစီယာ Glacierအသံထွက်မမှန်ရင်စိတ်ဆိုးနဲ့နော်း) စတဲ့သူတွေနဲ့ စင်းဒလာကိုလဲကျွေးချင်ပါတယ်။ တခါတခါပေါ်လာတဲ့ မမသီရိ၊ ကောင်းကင်ပြာ၊ မနော်နဲ့ မ၀ါကိုလဲကျွေးပါမယ်။ နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ကတော့ မောင်စိန်ပါ။ ဘယ်သူကျန်ခဲ့လဲ ဖိတ်ဖို့ မကျန်ဘူးထင်တာပဲနော်။ ကျန်ခဲ့ရင်လဲ စိတ်မဆိုး၊စိတ်မကောက်ပါပဲ ၀င်ဝှက်စားသောက်သွားစေချင်ပါတယ်၊ တကယ်ပါ အထက်ဖော်ပြပါ လူတွေအားလုံးကိုတကယ် ချက်ကျွေးချင်စိတ်ရှိပါတယ်၊ ကံဆုံတဲ့တနေ့ကျရင်တကယ်ချက်ကျွေးပါ့မယ် အပြင်မှာပေါ့နော် တကယ်စားရစေမယ်။ နောက်ဘလောခ်စပေါ့ မဟုတ်တဲ့ မာတီပလိုင်းက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုလဲ မမေ့မလျော့ခေါ်ကျွေးချင်ပါတယ် ဂြိုလ်သူမ မိဘုတ်နဲ့ ခမမ ပါ။
အလှပဂေး သရဖူဆောင်း မယ်စကြာဝဠာကျွမ်းပြန်ကျစေတဲ့
၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်
၂၃ ရက် ဧပရယ်လ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
Posted on April 22, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ကြာဇံ25 Comments on ည ၁၁နာရီ။